Hurdo nagu filan oo aan habeenki seexannaa waxay qayb weyn ka qaadataa caafimaadkeenna guud.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xaaladda gurracan ee ay ku nool yihiin dadka Yemen ay ka dhalatay faragelinta ba’an ee ay dalkaasi ku hayaan Sucuudiga iyo Imaaraatka.
Kumannaan Falastiiniyiin ayaa maanta gelinka dambe isugu soo baxay Qaza si ay u xusaan sanad-guuradii koowaad ee ka soo wareegatay dibadbaxyadii uu dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay darbiga ay Israa`iil ka dhistay xadka Qaza.
Waxay dad badani laga yabaa inay siweydiinayaan qaabka ay isu fahmaan
Pope Francis oo booqanaya isu tagga Imaraadka Carabta
Wadaadka ugu weyn madhabta diinta Katooliga ah Pope Francis ayaa maanta galinka dambe booqanaya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Wadahadalada nabadda Suuriya ee Geneva oo aysan natiijo ka soo bixin
Wadahadalladii ka soconayay magaalada Geneva ee loogaga gol lahaa in lagu dhiso guddi ka soo shaqeeya dastuurka Suuriya ayaa soo dhammaaday iyadoo uusan ka soo bixin wax rasmi ah oo la taaban karo.
Dekeddan ayaa waxaa gcanat ku haya falaagada Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira xulafada Sacuudiga.
Masaajidda ku yaalla Sacuudi Carabiya iyo Turkiga ayaa salaadda janaasada looga tukaday wariyihii la dilay ee Jamaal Khaashuqji.
Sida ay sheegtay daraasad dhawaan soo baxday waxaa aad hoos ugu dhacay labaatankii sano ee u dambeeyey gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha Afrika lagu sameeyo.
Dilka Khaashuqji: Cajaladdi ku saabsaneyd oo Turkigu la wadaagay Sacuudiga iyo Mareykanka
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay codad duuban oo caddeyn u ah dilka Khaashuqji loo geystay inuu la wadaagay Mareykanka, Ingiriiska, Sacuudiga iyo Waddama Kale.